खेल जनताको, नाम नेताको - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
अब टायर बाल्ने होइन, फूल रोप्ने राजनीति गरौं !
खेल जनताको, नाम नेताको
एउटा माटोको मूर्ति बनाएर हजारौ वर्ष अगाडि अस्ताएका श्रीकृष्णलाई कृष्णजन्मा अष्टमिका दिन बाल गोपाल नाचो नाचो नन्दलाला भनेर झोलुङोमा झुलाएझैँ देश पनि शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधब नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली नै हल्लाउनसम्म हल्लाउदा भएँ ।
यी सबै प्रधानमन्त्रीको कुर्सि चाखिसकेका हुन् । यिनलाइ पदमा बसेर पदको दुरुपयोग गर्नलाई बारम्बार सत्तामा पुर्याउने यी नै जनता होइनन ? सोच्ने हो भने द्वन्द्वकालमा प्रचण्डले माडिमा गाडि नै ध्वस्त हुनेगरी बालबच्चा सहित त्यहाँको जनजीवन नै उदाङ्गो बनाएका थिए ।
तर पनि त्यहाँका जनताले १ छाक मासु र भातमा काण्ड रच्ने रचनाकारलाई अत्याधिक बहुमतले विजय गराइदिए । अझैपनि यी दलहरुको झण्डा बोकेर आन्दोलनमा जानु भनेको चाहि आफ्नै खुट्टामा कुलाडी हान्नु हो, अब पनि तिमिहरुको बुद्धिको भाडोमा बिर्को यसरी नै लागिरहने हो भने जनता तिमी तँ गयौ - गयौ तिम्रा आउने सन्ततिहरु नै पानी बिनाको कुवामा डुबुल्कि मार्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । परिवर्तन आएन भनेर कुर्लिन्छौ तर परिवर्तन म बाटै गर्नुपर्छ भन्ने चाहि सोच्न पनि सक्दैनौ । परिवर्तन चाहनेले गोप्य मतदान पनि गोप्य तरिकाले नै दिदा के हुन्थ्यो । तर के गर्नु मासुभात र १ लिटर पेट्रोलमा भोटै साटिदिन्छौ ।
वा जनता वा मान्नु पर्छ तिमिहरुलाई के प्रचण्डलाई भोट देखाएर दिनुपर्ने थियो र ? आज त्यसको परिणाम तिमी भोटरले नै भोगिरहेका छौ नि । नेताको बोली र भाषणले देश परिवर्तन गर्न सकिँदैन जनताले चाहे भने जति बेला पनि सत्ता पल्टाउन सक्छन् । अब तँ जनताले सोच्नै पर्छ । हामी केका लागि आन्दोलनमा सहभागी भएका छौ । यी भ्रष्ट नेताको पछाडि लागेर टाएर बाल्दैमा न म परिवर्तन भए न त देश नै ! त्यसैले देश परिवर्तन गर्न सरकारले गरेका कुकर्मको आवाज उठाएर आम जनतालाई न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ बारम्बार यी भ्रष्टकोपछि जति लाग्छौ अन्त्यमा आफ्नै पुर्पुरो समाएर आफ्नै कर्मलाइ दोष दिनु शिवाए केही हुदैन।
अब टाएर बाल्ने राजनीति होइन फुल रोप्ने राजनीति गरौं ! तिम्रा बाउ काग्रेस भन्दैमा तिमि जन्मिदै काग्रेस, कम्युनिष्टको टिका लगाएर जन्मिएका त हैनौ नि । अब पनि सोचेनौ भने देश अहिले जसरी विपरित दिशातर्फ धकेलिदै छ भोलीका दिनमा जता हेर्यो उतै मानवरुपी दैत्यहरुले चिथोर्ने छन् ।
त्यसैले आफ्नो स्वविबेक प्रयोग गरौं, भ्रष्टाचारीको नाङ्गो नाच हेरिरहने होइन इमानदारीताको पहिरन पनि पहिरिने गरौं होइन भने भोलिका सन्ततिले निलो आकाश होइन चारैतिर औसिको रात झैँ अन्धकारमा रुमलिनुपर्ने छ । शक्तिको प्रर्दशन गरेर तैले जनसागर उर्ल्याउने की मैले जनसागर उर्ल्याउने भनेर जनतालाई भेडा जसरी नचाउदा नि यी जनता नचेत्ने नै भएँ ।
अहिले तँ जनताले नै बुझ्नु पर्नेथ्यो कोरोना जस्तो माहामारीमा भोक-भोकै बासस्थान छोडेर सयौ किलोमिटर पैतालामा ठेला उठाउँदै बच्चा काखि च्याप्दै गाउ फर्किंदा काहा थियो सरकार ? अहिले १ छाक मासु भात दिन्छन् भन्दैमा सडक तताउने भन्दैमा झण्डा बोक्दै भ्रष्टलाई साथ दिन्छौ । काहाँ छ जनताको अस्तित्व खोइ ? काहाँ छ जनताको अदालत खोइ ? काहाँ पाइन निर्मलाले न्याय ? अहिले पनि संविधान विपरित गएर चुनाब गराउन बजार मूल्य मौलाउने क्रम जारी छ ।
अझपनि जनता चुप २, ४ जनाले मात्र न्याय खोजेर खोजिदैन कागको बथानमा बकुल्ला गए जस्तो हुन्छ त्यसैले न्यायको लागि जागौ । जस्तो देश उस्तै भेष भने जस्तो जस्तो नेता उस्तै जनता खेल तँ जनता नै खेल्छन तर नाम आउछ नेताको ।
लेखिका : इन्दिरा शर्मा विबेकशिल साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
# इन्दिरा शर्मा
बिहिवार, माघ १५ २०७७०४:२३:५०
ट्याक्सी चालकको प्रश्न-के हामी यो देशका नागरिक होइनौं ?
राजा–प्रजाले ल्याएको लोकतन्त्र
कलामा जमेको जोशिलो युवा